Gunship Strike 3D 1.0.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Gunship Strike 3D
Gunship Strike 3D ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
လက်နက်ကိုင်သပိတ် Google မှာရရှိနိုင်တဲ့အရှိဆုံးရှိုင်းနှင့်လက်တွေ့ကျကျကို 3D ရဟတ်ယာဉ်များစစ်တိုက်အရေးယူဂိမ်း Play ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအန္တရာယ်အရှိဆုံးအကြမ်းဖက်သမားအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ရန်!
လက်နက်ကိုင်သပိတ်အာဏာအရှိဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်အာဆင်နယ်ထိုင်ခုံ၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိ။ ဗျူဟာမြောက်ကမ္ဘာအနှံ့ကိုရန်သူတို့အလုံးအရင်းကိုကွပ်မျက်ရန်သင့်အစွမ်းထက်စက်တွေသေနတ်များနှင့်ကြီးကျယ်သောဒုံးကျည်များပစ်ခတ်။ တိကျစွာနှင့်အတူသင်၏တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်လမ်းပြနှင့်ကမ္ဘာရဲ့အကြီးမားဆုံးသောတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံကအတွက်ရန်သူသည်စစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများဖြိုဖျက်! လက်နက်ကိုင်သပိတ်ကဒီ # 1 စစ်ရဟတ်ယာဉ်အရေးယူဂိမ်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရက်စက်၏ညာဘက်ငွေပမာဏပျံသန်း, နည်းဗျူဟာပေါင်းစပ်!
- တိုက်ပွဲ mode ကို & အန္တိမစိန်ခေါ်သူဌေးက mode မှာ 40+ အဆင့်ဆင့်
- လက်တွေ့ကို 3D ဂရပ်ဖစ်နဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Gunship Strike 3D အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Gunship Strike 3D အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Gunship Strike 3D အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
appssimostore စတိုး 120 58.56k
Gunship Strike 3D ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Gunship Strike 3D အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Candy Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.candy-mobile.com/policy.htm
App Name: Gunship Strike 3D
Release date: 2018-05-28 23:30:44
Gunship Strike 3D APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ